4 Iinketho zeLayisensi ye-SPSS yeeNkcukacha-manani
NguYesu Salcedo, uKeith McCormick
Unokhetho olumangalisayo onokukhetha kuzo ekufumaneni ikopi yakho yeeNkcukacha-manani ze-SPSS, kugxilwe kwiindlela ezahlukeneyo zokunika ilayisensi i-SPSS. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukukhusela ikopi okanye ukuba ufuna ukuqonda ngcono okungaphaya, eli nqaku liza kukunceda ufumane olona hlobo luhle lwe-SPSS. Ukukhutshwa kwamaphepha-mvume ayikokuphela kokhetho, kodwa lukhetho lokuqala olukhulu ekufuneka ulwenzile.
Iinketho ezine zokufumana iilayisensi ziyafumaneka:
Masikhethe ukhetho olulula kwindlela kuqala. Ukuba ufuna indlela yokuziqhelanisa nokuzilolonga kule ncwadi kwaye khange ube nohlobo lwetyala lwe-SPSS kunyaka ophelileyo, uya kufuna ukuqala ngesilingo sasimahla. Imithetho yovavanyo iyahluka unyaka nonyaka, kodwa ubukhulu becala ityala liziintsuku ezili-14 okanye iintsuku ezingama-30. Olunye ukhetho ekufuneka ulwenzile yinkqubo yokusebenza: Windows okanye iMac.
Kukwakhona nohlobo lweseva ye-SPSS ekunikeza ngenkqubo yesithathu yokusebenza: iLinux. Kwakhona, kukho zombini i-32-bit kunye ne-64-bit-versions. I-IBM ibonelela ngamaxwebhu amahle emicimbi yokuhambelana kwenkqubo kwiwebhusayithi yabo.
Isilingo sasimahla sisoloko siyinguqulelo ye-SPSS kwaye ihlala inazo zonke iimodyuli zokongeza. Isilumkiso esinye malunga nesilingo sasimahla: Inguqulelo yobhaliso, ngelixa ikhutshelwe ngokupheleleyo kumatshini wakho, kufuneka igcine ukufikelela kwi-Intanethi. Ke, i-SPSS inokukunika ingxaki ukuba uhlala ungaxhunyiwe kwi-intanethi.
Kuba uvavanyo lwasimahla lubandakanya ukufikelela kuzo zonke iimodyuli zokongeza, qiniseka ukubakhuphela ngaphandle ukuze ujikeleze. Ngexesha elithile, isigqibo sokubandakanya imodyuli sinokongeza amakhulu eedola kutyalo-mali lwakho, ke zazi iimodyuli ngelixa unako.
Kwinqaku lonke lenqaku, sichaza ezinye iindlela ezintathu zokwenza iilayisensi kunye nokhetho olongezelelekileyo ekufuneka ulwenzile. Nasi isishwankathelo esikhawulezayo sendlela yokukhetha phakathi kwabo emva kokuba uluphelisile ufikelelo lwakho kwisilingo sasimahla:
Iinguqulelo zekhampasi ezinamaxabiso ezifundo zabo zihlala zeyona ndlela ingabizi mali ininzi, kodwa kuya kufuneka ulungele ukuyithenga.
Izicwangciso zobhaliso zikuvumela ukuba utshintshe ingqondo yakho inyanga nenyanga, eziluncedo ukuba iimfuno zakho zinokutshintsha.
Cinga ngezicwangciso zorhwebo ngekota okanye kwilayisensi engapheliyo ukuba ulungele ukuzibophelela kwi-SPSS iminyaka emininzi, ngaphandle kohlaziyo lwenguqulo.
Olu khetho lukwashwankathelwe kulo mzobo ulandelayo.
Ukukhetha ukhetho lwelayisensi ye-SPSS Statistics.
I-IBM's campus editions ngumyalelo obiza ixabiso eliphantsi kunalo naluphi na olunye ukhetho. Ukuba uvumelekile kolu khetho, kuya kufuneka ululandele ngokupheleleyo. Kuya kufuneka unxulumana nezifundo njengomhlohli okanye umfundi. Abanye abaphandi bezemfundo banokuba nomgangatho.
I-IBM ayithengisi ngokuthe ngqo olu khetho. Rhoqo kubhekiswa kuyo njengeGradPack okanye iPakethe yeFakhalthi, kuya kufuneka uyithenge ngomthengisi weqela lesithathu. Abathengisi akukho nzima ukuba bafumane kwi-Intanethi. Ukongeza, i-IBM idwelisa ezinye iinkampani zamaqabane .
Ngokwendalo, uyakufuna ukuqala ukhangele kabini ukuze ubone ukuba unakho ukufikelela simahla eyunivesithi njengomfundi okanye ilungu leFakhalthi ngokusebenzisa iphepha-mvume lokufunda ngokubanzi. Ukuba awukwazi ukufikelela, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uthenge isiseko, umgangatho, okanye ushicilelo lweprimiyamu. Dwelisa iimodyuli zokongeza kuhlelo ngalunye kule theyibhile ilandelayo. Unokwazi ukufumana imigaqo eyolula ixesha elingaphezulu kweenyanga ezili-12 kwezinye iimeko.
Iintlelo zeCampus kunye neMigqaliselo
UHlelo Iimodyuli ezongeziweyo Imigaqo
Isiseko Akukho nanye Iinyanga ezi-6 okanye ezili-12
Imigangatho Izibalo eziPhambili ze-IBM SPSS
Ukunyanzelwa kwe-IBM SPSS
Iinyanga ezi-6 okanye ezili-12
INkulumbuso Izibalo eziPhambili ze-IBM SPSS
Iibhile ze-IBM SPSS zesiko
Ukulungiswa kwedatha ye-IBM SPSS
I-IBM SPSS yexabiso elilahlekileyo
ipilisi epinki namhlophe 44 107
Uqikelelo lwe-IBM SPSS
Isigqibo seMithi ye-IBM SPSS
Ukuthengisa ngokuthe ngqo kwi-IBM SPSS
Isampulu ye-IBM SPSS
IBM SPSS Ukudibanisa
Iinethiwekhi ze-IBM SPSS zeNeural
Iindidi ze-IBM SPSS
Uvavanyo lwe-IBM SPSS ngqo
Ingcebiso yethu kukuthenga uhlobo olusisityebi lweprimiyamu kunye nelona xesha lide. Ukulingana kohlelo lwekhampasi yeprimiyamu kuya kubiza amawaka eedola ngonyaka ngalo naliphi na elinye ilayisensi. Eli lithuba lakho lokuzama iimodyuli ezongeziweyo ngexabiso eliphantsi kakhulu ukumisela ukuba yeyiphi oyifumana iluncedo. Ngokukodwa, sicinga ukuba imodyuli yeeTafile yesiqhelo iluncedo kuye wonke umntu osebenzisa i-SPSS. Ukhetho lwamaxabiso ezifundo lusezantsi kakhulu kangangokuba kunokuba yindleko enkulu ukuthatha ikhosi eyunivesithi ukuze ubukhali izakhono zakho kunye nokufikelela kumaxabiso ezifundo.
Ukuba ubona uluhlu lwe-AMOS campus edition, qaphela ukuba i-IBM SPSS AMOS ayisiyomodyuli yokongeza. Yisoftware ezimeleyo yokwenza iModeli yoLingano lweSakhiwo.
Xa uthenga umrhumo wenyanga, awunakukhathazeka malunga nenombolo yenguqulo. Umzekelo, ngelixa sibhala le ncwadi, sisebenzise iphepha-mvume ledesktop elingaxhunyiwe kwi-intanethi elinenombolo yenguqulo 27, kodwa umrhumo awunayo inombolo enjalo. Ngenxa yokuba uhlawula inyanga nenyanga, umane ukhuphela uhlaziyo rhoqo. Ngokucacileyo uncedo oluphambili lokubhaliselwa kukuba isoftware ihlala ihlaziyiwe.
Nangona ukhetho lobhaliso lufuna ukuba ukhuphele isoftware kumatshini wakho, ilayisensi ifuna ukufikelela kwi-Intanethi. Ukuba usebenzisa le nguqulo ye-SPSS ngaphandle kweintanethi, inokuyeka ukusebenza kuba kufuneka ijonge iphepha-mvume ngamaxesha athile.
Ngamaxesha athile ndwendwela imenyu yoNcedo kwaye ucofe uQwalaselo loHlaziyo. Uhlawule ukubuyekezwa, ke qiniseka ukukhuphela.
Ngesicwangciso sobhaliso, i-IBM yenza ukuba kube lula ukongeza kunye nokulahla iimodyuli. Umzekelo, unokuthenga imodyuli yokongeza kwiprojekthi ekhethekileyo ngexesha elifutshane njengenyanga enye kwaye ulahle imodyuli kwinyanga elandelayo.
Ngamanye amaxesha i-IBM ibonelela ngentlawulo yonyaka yobhaliso lwakho lwenyanga ngokutshintshisa ngesaphulelo. Kodwa nokuba uhlawula minyaka le, iseyinguqulelo yobhaliso- hayi iinguqulelo ezingapheliyo okanye zexesha.
Ubhaliso lukwanokukhetha okukhethiweyo kunye nokwanda kokufikelela kwiimodyuli zokongeza. Qaphela, nangona kunjalo. Ngokungafani nelayisensi yokulingwa okanye amaxabiso ezifundo, iimodyuli zokongeza zinokuphindeka kabini okanye kathathu kutyalo-mali lwakho lwenyanga. Ukuba awukazazi ngeemodyuli kuya kuba nzima ukugqiba into oyifunayo kumagama kuphela. Unokucinga ngokufumana ingxelo epheleleyo yenyanga enye okoko unokuzibophelela ekuchitheni ixesha elithile kuloo nyanga ubazama.
Lumnka. Ii-IBM's zinike ukhetho oluphuculweyo lokukhetha ukubhalisa njengegama Iitafile zesiko kunye no-Adv. Izibalo kwiwebhusayithi yabo, kodwa ungathathi la magama ngokoqobo kuba ababhekiseli kwimodyuli yokongeza efakwe kukhetho. Jonga kule theyibhile ilandelayo ukuze ufumane uluhlu lweemodyuli zokongeza ezifakwe kukhetho ngalunye.
Ukhetho lwamaxabiso obhaliso Iimodyuli ezongeziweyo zibandakanyiwe
Isiseko ISiseko seNkcukacha-manani se-SPSS
Xanax ujongeka njani
Iitafile zesiko kunye no-Adv. Izibalo Zonke iimodyuli kuhlelo olusisiseko
Uqikelelo kunye neMithi yeziGqibo Zonke iimodyuli kwiitafile zangokwezifiso kunye no-Adv. Ushicilelo lwezibalo
Uluhlu lokutya olucekeceke nge-potassium
Isampulu kunye novavanyo olunzima Zonke iimodyuli kuhlelo loQikelelo kunye neMithi yeziGqibo
Iintlelo zorhwebo zibonelela ngeendlela ezimbini zokukhetha iphepha mvume eliqhelekileyo: ilayisenisi yekota, apho uthenga khona i-SPSS unyaka, kunye nelayisensi engapheliyo, apho ungumnini, hayi umqeshi, we-SPSS, enezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga. Kwezi ntlobo zelayisensi, kuya kufuneka unxibelelane ne-IBM kwaye uthethe nommeli, oza kuba nakho ukukunika ikhowudi yelayisensi. Nangona ufuna ukuba kwi-intanethi ukwenza ikhowudi yelayisensi, awudingi ukuba ungene kwi-Intanethi xa usebenzisa i-SPSS.
Phantse kube kanye ngonyaka, i-SPSS ibonelela ngenguqulelo entsha ehlaziyiweyo kwaye inike inombolo yenguqulo. Ngexesha lokubhalwa kwale ncwadi, ababhali basebenzise uguqulelo 27 (olusezantsi nje kancinci kunenani leminyaka okoko i-SPSS ifumaneke kwiikhompyuter zakho). Inani lamalungu oluntu lwe-SPSS akhetha ukutsiba uguqulelo amaxesha ngamaxesha, okanye ashiye ngasemva uguqulelo lwamva nje. Ukuba wenza njalo ngokweqhinga, inokumela ukonga iindleko. Esi sicwangciso sifuna ukuba wenze utyalomali oluphambili kwaye uhambe kancinci ngaphandle kohlaziyo. Ukuba umbono wokulahleka kuhlaziyo kunye neempawu ezintsha azithandeki, ukubhaliswa kwenyanga kunokuba lolona khetho lufanelekileyo kuwe.
Kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba zeziphi iimodyuli zokongeza ozifunayo. Iimodyuli zokongeza zonyusa kakhulu iindleko zekota yakho okanye yelayisensi engapheliyo, kakhulu njengokukhetha ukubhalisa. Ummeli wentengiso uya kukubuza ukuba zeziphi iimodyuli ozifunayo. Le theyibhile ibonisa iimodyuli zokongeza ezinxulunyaniswa nohlelo ezine zeelayisensi ezingapheliyo nezexesha.
UHlelo Iimodyuli ezongeziweyo zibandakanyiwe
Isiseko Isiseko se-SPSS Statistics kuphela
Imigangatho Zonke iimodyuli kuhlelo olusisiseko
Ingcali Zonke iimodyuli kuhlelo oluqhelekileyo
INkulumbuso Zonke iimodyuli kuhlelo lobungcali
Iziphumo zecala ze-omeprazole 40 mg
Qaphela xa uthelekisa ezi tafile zimbini ukuba iinyanda kwizicwangciso zobhaliso zahlukile kunezo zentengiso.
idramamine, yenzelwe ntoni?
Ungasela ixesha elingakanani emva kwee-antibiotics
n-acetylcysteine ​​yeziphumo ebezingalindelekanga
Uyenza njani ikhonkco lokuhlawula